Articles Archives - Myanmar Lifestyle, Tech Review, Food Review
Maurizio Sarri ကို နည်းပြရာထူးက ထုတ်ပယ်သင့်နေပြီလား
by Naing Linn
မန်ယူအသင်း ကောင်းကင်ယံမှာ လင်းလက်လာဦးမယ့် ကြယ်တစ်ပွင့် (သို့) Tahith Chong
Naing Linn . 1 hour ago
Naing Linn . 18 hours ago
အငြင်းပွားမှုတွေကို ဖြေရှင်းပေးမယ့် VAR စနစ်က အငြင်းပွားစရာဖြစ်လာပြီလား
by Naing Linn . 1 day ago
ဒီရာသီ ဖလား(၃)လုံးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့ အသင်းများ
ချယ်လ်ဆီး – မန်ယူပွဲမှာ မြင်တွေ့ရဖို့ရှိနေတဲ့ အဓိကကျတဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုများ
ရာထူးက ထုတ်ပယ်ခံရဖို့ ရေပန်းအစားဆုံး ပရီးမီးယားလိဂ်နည်းပြများ
by Naing Linn .2days ago
ဘရာဇီးလ်ဘောလုံးသမိုင်းမှာ နတ်ဘုရား တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့သူ Ronaldo
by Naing Linn .3days ago
အမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုကို ရှုံးပွဲမရှိဘဲ ရယူခဲ့တဲ့ ဥရောပအသင်းများ
ဥရောပထိပ်တန်းလိဂ်မှာ ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ သက်ကြီးကစားသမားများ (၂)
by Ko Kyue .4days ago
ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး ခံစစ်အတွဲအဖက်များ (၂)
by Naing Linn .4days ago
ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး ခံစစ်အတွဲအဖက်များ (၁)
ဥရောပထိပ်တန်းလိဂ်မှာ ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ သက်ကြီးကစားသမားများ (၁)
Hamšík ( သို့ ) နေပယ်လ်မြို့ရဲ့ ထာဝရသူရဲကောင်း
‘Class of ’92’ မျိုးဆက်ကို စင်တင်ပေးခဲ့သူ မန်ယူလူငယ်နည်းပြဟောင်း Eric Harrison ကွယ်လွန်
ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ ခြေရာကို လိုက်မနင်းနိုင်တဲ့ ဘောလုံးသမားများ
Messi နဲ့ Cristiano Ronaldo ခေတ်လွန်မှာ ဘောလုံးလောက ဘုရင်ဖြစ်လာမယ့်သူက Mbappe များလား
Solari လက်ထက်မှာ ရီးယဲလ်အသင်းတိုးတက်လာတဲ့ အကြောင်းအရင်းများ
by Ko Kyue .5days ago
အေဂျက်စ်နဲ့ ရီးယဲလ် နှစ်သင်းလုံးမှာ ကစားဖူးတဲ့ ကစားသမားများ
ဘောလုံးလောကရဲ့ ဂန္ထ၀င်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရဖို့ Messi နဲ့ Cristiano Ronaldo အတွက် ကမ္ဘာ့ဖလားမလိုဘူး
ရီးယဲလ်နဲ့ လမ်းခွဲခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ချန်ပီယံလိဂ် အောင်မြင်မှုနဲ့ ဝေးကွာခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေ
ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ရဲ့ မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲမှာ ပါဝင်ကူညီခဲ့တဲ့ OPPO
Android Pie Update ရရှိဦးမယ့် Mi A1
အခကြေးငွေပေးရတဲ့ App တွေကို အချိန်အကန့်သတ်နဲ့ Free ယူကြမယ်
အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်အခမဲ့ Download ပြုလုပ်နိုင်မယ့် Android App များ
Notch တစ်ခုအပိုထပ်ထွက်လာတဲ့ Google Pixel3XL
Xiaomi ရဲ့ Mi Moji App ကို Android စမတ်ဖုန်းတိုင်းမှာသုံးလို့ရပြီ
iPhone XS ရဲ့ Charging ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ iOS 12.0.1 ကို Update လုပ်ဖို့လိုမယ်
OPPO ဟာ ငယ်ရွယ်နုပျိုမှုနဲ့ ဖက်ရှင်ကျလှပမှုရှိတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေကိုဦးစားပေးထုတ်လုပ်တဲ့ နည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တာနဲ့အညီ မြန်မာ့နည်းပညာလောကအတွက် အတတ်ပညာရှင်များ နှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပေးနေတဲ့ ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ရဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲအတွက် ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ဟာ နိုင်ငံအတွက် နည်းပညာရှင်တွေကို နှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပေးနေသလို အခု ၂၀၁၉ အတွက် မျိုးဆက်သစ် နည်းပညာရှင်လူငယ်မောင်မယ်များကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်နဲ့ ၁၆ ရက်နေ့တွေမှာ မောင်မယ်သစ်လွင် ကြိုဆိုပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီပွဲမှာ OPPO Myanmar ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ အနာဂတ်နည်းပညာရှင်လူငယ်မောင်မယ်တွေကို ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုခြင်း နဲ့ OPPO F Series ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်ကုန် New Year Special Edition Jade Green ကို ပရိုမိုးရှင်းပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ၂ခုကြောင့် ကြိုဆိုပွဲရဲ့ Diamond Sponsor အနေနဲ့ပါဝင်ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
OPPO Myanmar အနေနဲ့ ၅မိနစ်အားသွင်းပြီး ၂နာရီဖုန်းပြောနိုင်တဲ့ VOOC အမြန်အားသွင်းစနစ်၊ ရေစက်ပုံစံ မျက်နှာပြင်ဒီဇိုင်း၊ 25MP AI ရှေ့ ကင်မရာနဲ့ 16MP+2MP နောက်ကင်မရာ ၂ လုံးတို့ပါဝင်တဲ့ F9 Series (New Year Edition) ဖြစ်တဲ့ အဖြူ+ကျောက်စိမ်း နှစ်ရောင်စပ် Jade Green အရောင်သစ်စမတ်ဖုန်းကို OPPO Myanmar က ၄သိန်း ၁သောင်း ၉ထောင့် ၉ရာ (၄၁၉,၉၀၀) ကျပ်နဲ့ ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်နေ့မှာစပြီး မြန်မာပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာစတင်ရောင်းချပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
OPPO Myanmar ဟာ ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ရဲ့ ၂၀၁၉ခုနှစ် မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲ ကို တက်ရောက်လာတဲ့ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေကို အမှတ်တရလက်ဆောင်များပေးခြင်းနဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ပွဲရှိ OPPO Photo Booth တွေမှာ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး OPPO Myanmar ရဲ့ တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာမှာရှိတဲ့ Photo Contest Post အောက်မှာ ဓါတ်ပုံများတင်စေပြီး F9 Jade Green စမတ်ဖုန်းလက်ဆောင် ဆုပေးတဲ့ ပျော်ရွှင်စရာအစီအစဉ်တစ်ခုကိုလည်းပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲမှာ ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်အစြဖ် ရဲလေး၊ Xbox ၊ Projet K ၊ ပိုပိုဟေသာ၊ ဂျိုကာ စတဲ့နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်တွေပါဝင်တင်ဆက်ခဲ့သလို King & Queen ရွေးချယ်ခြင်း၊ ထူးချွန်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကို ဆုများချီးမြှင့်ခြင်း နဲ့ သီချင်းအကပြဇာတ်များ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခြင်းတို့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
Mi A1 ဆိုတာကတော့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Xiaomi ရဲ့ ပထမဦးဆုံး Android One Project ဖုန်းတစ်လုံးပါ။ Mi 5X နဲ့ ROM အမျိုးအစားသာကွဲပြားပေမယ့် Update ရရှိတဲ့အပိုင်းမှာတော့ Mi A1 ကပိုပြီးမြန်ပါတယ်။
အခုရရှိမယ့် Pie Update ဟာ Stable Version ဖြစ်သလို File Size 1074MB ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ Major Update တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပြောင်းလဲမှုတွေအနေနဲ့Navigation Gesture အသစ်တွေ၊ Xiaomi ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Feature တချို့နဲ့ Adaptive Battery ၊ Brightness စတဲ့ Feature သစ်တွေပါဝင်လာတယ်လို့ ဘင်္ဂလားဒေခ်ျ့နိုင်ငံက Mi A1 အသုံးပြုသူတစ်ဦးက အစောပိုင်း Report တစ်ခုအနေနနဲ့ပေးပို့လာတာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Update ကို နိုင်ငံအလိုက် စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း Update ရရှိနိုင်တယ်လို့သိရပြီး Mi A1 User တွေအနေနဲ့ မကြာခဏဆိုသလို Updater ကတဆင့် Checking ပြုလုပ်ပေးဖို့တော့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ Update ရလာခဲ့ရင်လည်း Connection ကောင်းမွန်တဲ့ WiFi ကိုသာအသုံးပြုပြီး Update ပြုလုပ်သင့်ကြောင်းလည်းအကြံပြုထားပါတယ်။
<h1>Android Pie Update ရရှိဦးမယျ့ Mi A1</h1>
Mi A1 ဆိုတာကတော့ ၂၀၁၇ ခုနှဈကထှကျရှိခဲ့တဲ့ Xiaomi ရဲ့ ပထမဦးဆုံး Android One Project ဖုနျးတဈလုံးပါ။ Mi 5X နဲ့ ROM အမြိုးအစားသာကှဲပွားပမေယျ့ Update ရရှိတဲ့အပိုငျးမှာတော့ Mi A1 ကပိုပွီးမွနျပါတယျ။
အခုရရှိမယျ့ Pie Update ဟာ Stable Version ဖွဈသလို File Size 1074MB ဝနျးကငျြရှိတဲ့ Major Update တဈခုဖွဈပါတယျ။ ပွောငျးလဲမှုတှအေနနေဲ့Navigation Gesture အသဈတှေ၊ Xiaomi ရဲ့ကိုယျပိုငျ Feature တခြို့နဲ့ Adaptive Battery ၊ Brightness စတဲ့ Feature သဈတှပေါဝငျလာတယျလို့ ဘင်ျဂလားဒခြျေ့နိုငျငံက Mi A1 အသုံးပွုသူတဈဦးက အစောပိုငျး Report တဈခုအနနေနဲ့ပေးပို့လာတာဖွဈပါတယျ။
<img class=”aligncenter wp-image-132801″ src=”https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/akhayarmedia.com/wp-content/uploads/2018/12/11124600/31282677287_e706591416_c.jpg” alt=”” width=”600″ height=”1067″ /> အဆိုပါ Update ကို နိုငျငံအလိုကျ စမျးသပျမှုမြားပွုလုပျပွီး ဖွညျးဖွညျးခငျြး Update ရရှိနိုငျတယျလို့သိရပွီး Mi A1 User တှအေနနေဲ့ မကွာခဏဆိုသလို Updater ကတဆငျ့ Checking ပွုလုပျပေးဖို့တော့လိုအပျမှာဖွဈပါတယျ။ အကယျ၍ Update ရလာခဲ့ရငျလညျး Connection ကောငျးမှနျတဲ့ WiFi ကိုသာအသုံးပွုပွီး Update ပွုလုပျသငျ့ကွောငျးလညျးအကွံပွုထားပါတယျ။
ထောင်သောင်းမက မရေတွက်နိုင်တဲ့ Android App တွေတည်ရှိရာ မူလ Source ကတော့ Play Store ပါ။ Android ရဲ့ကိုယ်ပိုင် App Store ဖြစ်တာနဲ့အမျှဖုန်းပေါ်မှာလိုအပ်သမျှ App တွေအကုန်လုံးကို ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ Android Game နဲ့ App တွေကိုလည်း Paid နဲ့ Free ဆိုပြီး ဝယ်သင့်တာဝယ် အခမဲ့ယူသင့်တာယူနိုင်အောင်စီမံပေးထားပါတယ်။ Play Store ရဲ့ Editor တွေက အပတ်တိုင်းမှာ တချို့သော အခပေး App နဲ့ Game တွေကို အချိန်ကန့်သတ်ပြီး အခမဲ့ Download ပြုလုပ်ခွင့်ပေးကြပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာဆိုရင်လည်း အဲ့လိုအခွင့်အရေးကောင်းနဲ့ ပြန်ကြုံရပြီလို့ဆိုရမှာပါ။ App အမျိုးပေါင်း ၄၀ ကို အခမဲ့ Download ပြုလုပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပြန်ပါပြီ။
Budget Book Pro – Personal Finance Budget Manager $0.99 -> Free; Sale ends in4hours
Christmas Gift List Full $2.99 -> Free; Sale ends in4hours
App Backup & Share Pro $1.99 -> Free; Sale ends in 1 day
Rotation Control Pro $2.99 -> Free; Sale ends in 1 day
World Clock Pro – Timezones and City Infos $0.99 -> Free; Sale ends in 1 day
HeritageDaily $1.49 -> Free; Sale ends in2days
Anime Pose 3D $1.99 -> $0.99; Sale ends in3days
Anime Girl Pose 3D $2.49 -> $0.99; Sale ends in3days
Chibi avatar $0.99 -> Free; Sale ends in3days
Breathing Point – Relax, Calm, Breathe Meditation $0.99 -> Free; Sale ends in5days
BLeBRiTY $0.99 -> Free; Sale ends in7days
Numberwiz $0.99 -> Free; Sale ends in7days
Terra Fighter Pro $0.99 -> Free; Sale ends in 1 day
Terra Fighter2Pro $0.99 -> Free; Sale ends in 1 day
Can you escape prison – Portal PRO $0.99 -> Free; Sale ends in2days
Lone Hero RPG | VIP $0.99 -> Free; Sale ends in2days
Mini Arcade Golf: Pocket Tours $1.99 -> Free; Sale ends in2days
Quadropoly Academy – Data Science for Board Game $1.99 -> Free; Sale ends in2days
Age of Civilizations Africa $1.95 -> Free; Sale ends in3days
Infinity Dungeon VIP: RPG Adventure $0.99 -> Free; Sale ends in4days
League of Stickman 2018- Ninja Arena PVP(Dreamsky) $0.99 -> Free; Sale ends in4days
Mental Hospital III $0.99 -> Free; Sale ends in4days
Stone Of Souls $0.99 -> Free; Sale ends in4days
Super Dangerous Trap $0.99 -> Free; Sale ends in4days
Buff Knight Advanced – Retro RPG Runner $0.99 -> Free; Sale ends in5days
Math Games for Kids Pro $0.99 -> Free; Sale ends in5days
Reporter $0.99 -> Free; Sale ends in5days
Knife Hit for Smartwatch $1.49 -> Free; Sale ends in6days
Nordic Storm Solitaire (Full) $4.99 -> Free; Sale ends in6days
The Mystery of Blackthorn Castle $2.99 -> Free; Sale ends in6days
Bestia – Beastly Icon Pack $0.99 -> Free; Sale ends in4hours
Minimalist – Icon Pack $1.49 -> Free; Sale ends in 1 day
Bear for Zooper $0.99 -> Free; Sale ends in2days
Paper Windmills 3D Pro lwp $0.99 -> Free; Sale ends in2days
Ortus Icon Pack Pro $0.99 -> Free; Sale ends in3days
S8-UI Note 8Launcher Icon Pack- Nova, Apex, Action $0.99 -> Free; Sale ends in3days
Wallpaper Club Auto Wallpaper Changer[NO ADS] $0.99 -> Free; Sale ends in6days
Vacuum Icon Pack $0.99 -> Free; Sale ends in7days
အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ Download လုပ်ခွင့်ပေးထားတာမလို့ အချိန်ဆွဲနေလို့တော့မရပါဘူး။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ App လေးတွေပါရင် အမြန်ဆုံးသာဆွဲထားလိုက်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံက အသုံးပြုသူတွေအတွက် Download ပြုလုပ်တဲ့အခါ နိုင်ငံကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့် အဆင်မပြေတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ အဲ့အခါကျရင် တော့ ဒီ VPN တွေထဲက တစ်ခုခုကိုအသုံးပြုပြီးအဆင်မပြေမှုတွေကိုကျော်လွှားနိုင်မှာပါ။
အခကွေးငှပေေးရတဲ့ App တှကေို အခြိနျအကနျ့သတျနဲ့ Free ယူကွမယျ
ထောငျသောငျးမက မရတှေကျနိုငျတဲ့ Android App တှတေညျရှိရာ မူလ Source ကတော့ Play Store ပါ။ Android ရဲ့ကိုယျပိုငျ App Store ဖွဈတာနဲ့အမြှဖုနျးပျေါမှာလိုအပျသမြှ App တှအေကုနျလုံးကို ဒေါငျးယူနိုငျပါတယျ။ နောကျတဈခကျြကတော့ Android Game နဲ့ App တှကေိုလညျး Paid နဲ့ Free ဆိုပွီး ဝယျသငျ့တာဝယျ အခမဲ့ယူသငျ့တာယူနိုငျအောငျစီမံပေးထားပါတယျ။ Play Store ရဲ့ Editor တှကေ အပတျတိုငျးမှာ တခြို့သော အခပေး App နဲ့ Game တှကေို အခြိနျကနျ့သတျပွီး အခမဲ့ Download ပွုလုပျခှငျ့ပေးကွပါတယျ။ ဒီကနမှေ့ာဆိုရငျလညျး အဲ့လိုအခှငျ့အရေးကောငျးနဲ့ ပွနျကွုံရပွီလို့ဆိုရမှာပါ။ App အမြိုးပေါငျး ၄၀ ကို အခမဲ့ Download ပွုလုပျခှငျ့ပေးလိုကျပွနျပါပွီ။
အခြိနျအကနျ့အသတျနဲ့ Download လုပျခှငျ့ပေးထားတာမလို့ အခြိနျဆှဲနလေို့တော့မရပါဘူး။ ကိုယျကွိုကျတဲ့ App လေးတှပေါရငျ အမွနျဆုံးသာဆှဲထားလိုကျပါ။ မွနျမာနိုငျငံက အသုံးပွုသူတှအေတှကျ Download ပွုလုပျတဲ့အခါ နိုငျငံကနျ့သတျခကျြတှကွေောငျ့ အဆငျမပွတောမြိုးတှကွေုံရတတျပါတယျ။ အဲ့အခါကရြငျ တော့ ဒီ VPN တှထေဲက တဈခုခုကိုအသုံးပွုပွီးအဆငျမပွမှေုတှကေိုကြျောလှားနိုငျမှာပါ။
Google Play Store မှအခကြေးငွေနဲ့ပေးဝယ်ရတဲ့ App တချို့ ကိုတစ်ခါတစ်လေမှာ အခမဲ့အနေနဲ့ Download ပြုလုပ်ခွင့်ပေးတတ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း $4 ဝန်းကျင် တန်ကြေးရှိတဲ့ Flight Ninja | Cheap, Best Holiday Flights deals အပါအဝင်အခြား App ၂၇ မျိုးခန့်ကို အခမဲ့ Download ပြုလုပ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။
Camera4K Perfect Selfie Video Photo Editor $0.99 -> Free; Sale ends in9hours
Flight Ninja | Cheap, Best Holiday Flights deals $3.49 -> Free; Sale ends in2days
Side Protect: Auto Touch Guard $0.99 -> Free; Sale ends in2days
Steam Property – PRO $1.49 -> Free; Sale ends in4days
Video Player All Format – OPlayer $2.99 -> Free; Sale ends in4days
Blaze : Extract Files From Links To Download $0.99 -> Free; Sale ends in6days
Speed View GPS Pro $0.99 -> Free; Sale ends in6days
Unit Converter Pro $0.99 -> Free; Sale ends in6days
Lensinator – OCR, Object, Barcode Scanner $0.99 -> Free; Sale ends in7days
Johnny Bonasera 1 $2.49 -> Free; Sale ends in 1 day
13 Puzzle rooms $1.99 -> Free; Sale ends in2days
Tap tap cartoonist – Cartoon999 (VIP) $0.99 -> Free; Sale ends in3days
Can You Escape – Fear House PRO $0.99 -> Free; Sale ends in4days
Todlio $1.49 -> Free; Sale ends in5days
Dragon slayer Vip – i.o Rpg game $0.99 -> Free; Sale ends in6days
Dungeon999 $0.99 -> Free; Sale ends in6days
Math puzzles PRO2$0.99 -> Free; Sale ends in6days
AceSpeeder3 $0.99 -> Free; Sale ends in7days
Easter 3D Live Wallpaper $0.99 -> Free; Sale ends in9hours
P Icon Pack for Pixel $0.99 -> Free; Sale ends in9hours
Annabelle UI – Icon Pack $0.99 -> Free; Sale ends in2days
JarvisOne V4 for KLWP $0.99 -> Free; Sale ends in3days
Win10 Flat – Icon Pack $0.99 -> Free; Sale ends in5days
Temporal – Icon Pack $0.99 -> Free; Sale ends in7days
WaterColors – Icon Pack $0.99 -> Free; Sale ends in7days
Win Metal – Icon Pack $0.99 -> Free; Sale ends in7days
Download ပြုလုပ်ခွင့်ရမယ့်အချိန်က သိပ်မကျန်တော့တာကြောင့် အမြန်ဆုံး Download ပြုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။( Play Store မှာ နိုင်ငံမတူရင် Download ဆွဲခွင့်ပိတ်ထားတဲ့အတွက် VPN ကျော်ပြီး Down မှအဆင်ပြေပါမယ်။ အဲ့အတွက် အသုံးပြုရလွယ်ကူတဲ့ ဒီ VPN ကို Download အရင်ဆွဲကာ Location ပြောင်းပြီးမှ Download လုပ်ဖို့အကြံပြုပါတယ်။)
အခြိနျအကနျ့အသတျဖွငျ့အခမဲ့ Download ပွုလုပျနိုငျမယျ့ Android App မြား
Google Play Store မှအခကွေးငှနေဲ့ပေးဝယျရတဲ့ App တခြို့ ကိုတဈခါတဈလမှော အခမဲ့အနနေဲ့ Download ပွုလုပျခှငျ့ပေးတတျပါတယျ။ ဒီတဈခေါကျမှာလညျး $4 ဝနျးကငျြ တနျကွေးရှိတဲ့ Flight Ninja | Cheap, Best Holiday Flights deals အပါအဝငျအခွား App ၂၇ မြိုးခနျ့ကို အခမဲ့ Download ပွုလုပျခှငျ့ပေးထားပါတယျ။
Download ပွုလုပျခှငျ့ရမယျ့အခြိနျက သိပျမကနျြတော့တာကွောငျ့ အမွနျဆုံး Download ပွုလုပျဖို့တိုကျတှနျးပါတယျ။( Play Store မှာ နိုငျငံမတူရငျ Download ဆှဲခှငျ့ပိတျထားတဲ့အတှကျ VPN ကြျောပွီး Down မှအဆငျပွပေါမယျ။ အဲ့အတှကျ အသုံးပွုရလှယျကူတဲ့ ဒီ VPN ကို Download အရငျဆှဲကာ Location ပွောငျးပွီးမှ Download လုပျဖို့အကွံပွုပါတယျ။)
Google Pixel စမတ်ဖုန်းတွေဟာ Android စမတ်ဖုန်းတွေထဲမှာ သူမတူတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်၊ ပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့ Software Optimization စနစ်တွေကြောင့် မြင်သူတကာငေးပြီး လိုချင်စရာဖြစ်နေတဲ့ ဆယ်လီဖုန်းလေးတွေပါ။
Google ရဲ့ တတိယမြောက်မျိုးဆက်သစ် စမတ်ဖုန်းဖြစ်တဲ့ Pixel3နဲ့3XL ဟာဆိုရင်လည်း 2018 နဲ့ 2019 အတွက် အကောင်းဆုံး စမတ်ဖုန်းနေရာကို ယူမယ့်ဖုန်းတွေလို့သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရသူတွေပါ။ အဲ့လောက်ကောင်းမွန်ပြည့်စုံနေပြီး အထင်ကြီးစရာအပြည့်နဲ့ ဖုန်းတွေဖြစ်ပေမယ့် Pixel3XL ကတော့ စမတ်ဖုန်းသမိုင်းမှာ မှတ်တမ်းဝင်လောက်မယ့် ထူးထူးခြားခြား ပေါက်ကရ ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ Google ရဲ့ ပထမဦးဆုံး Notch ထည့်သွင်းထားတဲ့ Pixel3XL ဟာ Notch တစ်ခု အပို ထွက်လာတဲ့ Bug တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။
ဖုန်းတိုင်းတော့မဟုတ်ပေမယ့် Jessie Burroughs ၊ Kyle Gutschow နဲ့ UrAvgConsumer အပါအဝင် တခြား User တချို့မှာ အဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်ပေါ်နေကြပါတယ်။ သူတို့ ၃ယောက်ကတော့ တူညီတဲ့ ဖြစ်ရပ်မျိုးကို ၄င်းတို့ရဲ့ Twitter Account ကနေပြန်လည်မျှဝေရင်းနဲ့ တဖြေးဖြေးလူသိများပြီး သတင်းထွက်လာတာပါ။
ဒီပြဿနာဟာ Screen Rotation နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာ ရှုပ်ထွေးမှု အနည်းငယ်ဖြစ်ပြီး ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ အဲ့ဒီသတင်းထွက်ပြီးသိပ်မကြာခင်မှာပဲ Google ကတွေ့ရှိသွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့အတွက်လည်း အထူးအဆန်းဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ၄င်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက် System Update ကိုတော့ သိပ်မကြာခင်ထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာပဲပြောပြော ဟော်လိုဝင်းပွဲတော်လည်း နီးနေပြီဆိုတော့ Google က Halloween Suprise လုပ်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ အခုလိုဖြစ်ရပ်မျိုးကြုံတွေ့ရတဲ့ User တချို့ကတော့ စိတ်မဆိုးကြပဲ ဟာသတစ်ခုအနေနဲ့ ဝေမျှနေကြပါသေးတယ်။
Notch တဈခုအပိုထပျထှကျလာတဲ့ Google Pixel3XL
Google Pixel စမတျဖုနျးတှဟော Android စမတျဖုနျးတှထေဲမှာ သူမတူတဲ့စှမျးဆောငျရညျ၊ ပွညျ့စုံကောငျးမှနျတဲ့ Software Optimization စနဈတှကွေောငျ့ မွငျသူတကာငေးပွီး လိုခငျြစရာဖွဈနတေဲ့ ဆယျလီဖုနျးလေးတှပေါ။
Google ရဲ့ တတိယမွောကျမြိုးဆကျသဈ စမတျဖုနျးဖွဈတဲ့ Pixel3နဲ့3XL ဟာဆိုရငျလညျး 2018 နဲ့ 2019 အတှကျ အကောငျးဆုံး စမတျဖုနျးနရောကို ယူမယျ့ဖုနျးတှလေို့သတျမှတျခွငျးခံထားရသူတှပေါ။ အဲ့လောကျကောငျးမှနျပွညျ့စုံနပွေီး အထငျကွီးစရာအပွညျ့နဲ့ ဖုနျးတှဖွေဈပမေယျ့ Pixel3XL ကတော့ စမတျဖုနျးသမိုငျးမှာ မှတျတမျးဝငျလောကျမယျ့ ထူးထူးခွားခွား ပေါကျကရ ပွဿနာတဈခုဖွဈပှားခဲ့ပါတယျ။ Google ရဲ့ ပထမဦးဆုံး Notch ထညျ့သှငျးထားတဲ့ Pixel3XL ဟာ Notch တဈခု အပို ထှကျလာတဲ့ Bug တဈခုဖွဈနပေါတယျ။
ဖုနျးတိုငျးတော့မဟုတျပမေယျ့ Jessie Burroughs ၊ Kyle Gutschow နဲ့ UrAvgConsumer အပါအဝငျ တခွား User တခြို့မှာ အဲ့ဒီပွဿနာဖွဈပျေါနကွေပါတယျ။ သူတို့ ၃ယောကျကတော့ တူညီတဲ့ ဖွဈရပျမြိုးကို ၎င်းငျးတို့ရဲ့ Twitter Account ကနပွေနျလညျမြှဝရေငျးနဲ့ တဖွေးဖွေးလူသိမြားပွီး သတငျးထှကျလာတာပါ။
ဒီပွဿနာဟာ Screen Rotation နဲ့ပတျသကျတဲ့လုပျဆောငျခကျြတှမှော ရှုပျထှေးမှု အနညျးငယျဖွဈပွီး ပျေါပေါကျလာတာဖွဈမယျလို့ယူဆရပါတယျ။ အဲ့ဒီသတငျးထှကျပွီးသိပျမကွာခငျမှာပဲ Google ကတှရှေိ့သှားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့အတှကျလညျး အထူးအဆနျးဖွဈနတေယျလို့ဆိုပါတယျ။ ၎င်းငျးပွဿနာကိုဖွရှေငျးပေးဖို့အတှကျ System Update ကိုတော့ သိပျမကွာခငျထုတျပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။ ဘာပဲပွောပွော ဟျောလိုဝငျးပှဲတျောလညျး နီးနပွေီဆိုတော့ Google က Halloween Suprise လုပျတာလညျးဖွဈနိုငျပါသေးတယျ။ အခုလိုဖွဈရပျမြိုးကွုံတှရေ့တဲ့ User တခြို့ကတော့ စိတျမဆိုးကွပဲ ဟာသတဈခုအနနေဲ့ ဝမြှေနကွေပါသေးတယျ။
အခုနှစ် မေလ လောက်က Do Re Mi Fa So La Ti Do ဆိုတဲ့သံစဉ်နဲ့အတူ Xiaomi ရဲ့ Theme Songs ကို ချစ်စရာ တိရိစ္ဆာန်အကောင်လေးတွေက သီဆိုပုံဖော်ထားတဲ့ AR Emoji Video တစ်ပုဒ် ကို Teaser Video အနေနဲ့ အမြည်းတင်ခဲ့တာ မှတ်မိကြဦးမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ တိရိစ္ဆာန်အကောင်လေးတွေ ကိုတော့ Mi Moji လို့အမည်ပေးထားပေမယ့် နောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ဖုန်းတွေမှာ အထူးတလည်ပါဝင်လာတာမျိုး မရှိခဲ့ပါဘူး။ Mi Fans တွေအနေနဲ့လည်း မျှော်တလင့်လင့် ဖြစ်နေပေမယ့် သတင်းထူးထူးခြားခြား ထပ်ထွက်မလာတဲ့အတွက်မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်တောင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
အခုတော့ Mi Fans တွေကို Mi Moji လေးနဲ့ သွေးပူအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပါပြီ။ Mi ဖုန်းတွေမှာမှ မဟုတ်ပဲ Android Version 7.0 နဲ့အထက်ရှိတဲ့မည်သည့် Android စမတ်ဖုန်းပေါ်မှာမဆို Mi Moji ကိုစမ်းသပ်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Stable Version အနေနဲ့ထုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပေမယ့် Character တွေကိုတော့ စမ်းသပ်နေတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် Animation တွေက အရမ်းပီပြင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ (ချစ်ဖို့တော့ကောင်းပါတယ်) App ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ နှစ်သက်ရာ Character တွေကိုရွေးချယ်ပြီးအသုံးပြုလို့ရပါပြီ။ ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာအစား MiTu ၊ ဝက် ၊ မြေခွေး ၊ ပန်ဒါဝက်ဝံ အစရှိတဲ့ အကောင်လေးတွေကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ ရှေ့ဘက် Selfie Camera ကိုအသုံးပြုပြီး လုပ်ဆောင်တာကြောင့် သင့်မျက်နှာဟာ Selfie ရိုက်သလို အကွာအဝေးမှာရှိနေဖို့တော့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ မျက်နှာနဲ့ သီချင်းလေးတွေ၊ ဟာသလေးတွေလုပ်ပြီ Video Clips လေးတွေကို ပြန်လည်ဝေမျှနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Mi Moji App ကို Download ပြုလုပ်ထည့်သွင်းပြီးတော့ အလွယ်တစ်ကူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Download ပြုလုပ်ရမယ့် File Size ကတော့ 65MB ဖြစ်ပြီး Version ကတော့ 1.0 ဖြစ်ပါတယ်။
Download Mi Moji App
Xiaomi ရဲ့ Mi Moji App ကို Android စမတျဖုနျးတိုငျးမှာသုံးလို့ရပွီ
အခုနှဈ မလေ လောကျက Do Re Mi Fa So La Ti Do ဆိုတဲ့သံစဉျနဲ့အတူ Xiaomi ရဲ့ Theme Songs ကို ခဈြစရာ တိရိစ်ဆာနျအကောငျလေးတှကေ သီဆိုပုံဖျောထားတဲ့ AR Emoji Video တဈပုဒျ ကို Teaser Video အနနေဲ့ အမွညျးတငျခဲ့တာ မှတျမိကွဦးမယျထငျပါတယျ။ အဲ့ဒီ့ တိရိစ်ဆာနျအကောငျလေးတှေ ကိုတော့ Mi Moji လို့အမညျပေးထားပမေယျ့ နောကျပိုငျးထှကျတဲ့ဖုနျးတှမှော အထူးတလညျပါဝငျလာတာမြိုး မရှိခဲ့ပါဘူး။ Mi Fans တှအေနနေဲ့လညျး မြှျောတလငျ့လငျ့ ဖွဈနပေမေယျ့ သတငျးထူးထူးခွားခွား ထပျထှကျမလာတဲ့အတှကျမမေ့ပြေ့ောကျပြောကျတောငျဖွဈနခေဲ့ပါတယျ။
အခုတော့ Mi Fans တှကေို Mi Moji လေးနဲ့ သှေးပူအောငျလုပျပေးလိုကျပါပွီ။ Mi ဖုနျးတှမှောမှ မဟုတျပဲ Android Version 7.0 နဲ့အထကျရှိတဲ့မညျသညျ့ Android စမတျဖုနျးပျေါမှာမဆို Mi Moji ကိုစမျးသပျအသုံးပွုနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ Stable Version အနနေဲ့ထုတျပေးထားတာဖွဈပမေယျ့ Character တှကေိုတော့ စမျးသပျနတေုနျးပဲဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ Animation တှကေ အရမျးပီပွငျမှာတော့မဟုတျပါဘူး။ (ခဈြဖို့တော့ကောငျးပါတယျ) App ကိုဝငျလိုကျတာနဲ့ နှဈသကျရာ Character တှကေိုရှေးခယျြပွီးအသုံးပွုလို့ရပါပွီ။ ကိုယျ့ရဲ့မကျြနှာအစား MiTu ၊ ဝကျ ၊ မွခှေေး ၊ ပနျဒါဝကျဝံ အစရှိတဲ့ အကောငျလေးတှကေိုတှမွေ့ငျရမှာပါ။ ရှဘေ့ကျ Selfie Camera ကိုအသုံးပွုပွီး လုပျဆောငျတာကွောငျ့ သငျ့မကျြနှာဟာ Selfie ရိုကျသလို အကှာအဝေးမှာရှိနဖေို့တော့လိုမှာဖွဈပါတယျ။ ကိုယျနှဈသကျတဲ့ မကျြနှာနဲ့ သီခငျြးလေးတှေ၊ ဟာသလေးတှလေုပျပွီ Video Clips လေးတှကေို ပွနျလညျဝမြှေနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
Mi Moji App ကို Download ပွုလုပျထညျ့သှငျးပွီးတော့ အလှယျတဈကူအသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
Download ပွုလုပျရမယျ့ File Size ကတော့ 65MB ဖွဈပွီး Version ကတော့ 1.0 ဖွဈပါတယျ။
User အချို့ရဲ့ Report ပြုလုပ်မှုကြောင့် Apple ဟာ iOS 12 Stable Version ကို Update ထပ်လုပ်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ iPhone XS မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုကြောင့်အခု Update ကိုပေးလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
iPhone XS ကိုအားသွင်းကြိုးထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ Display ပွင့်လာပေမယ့် Charging Process ကိုတော့လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိတာကို User အတော်များများသတိထားမိလာကြတာကြောင့် Apple ကို Report လုပ်ပြီးမကြာခင်မှာ Bug Fix Update Version ဖြစ်တဲ့ 12.0.1 ကို ထုတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် iPhone XS အလုံးတိုင်းဖြစ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
၄င်း Update မှာ Charging ပြဿနာအပြင် Wi-Fi ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ 5GHz Band နဲ့ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ရမယ့်နေရာမှာ 2.4GHz Band နဲ့ပဲချိတ်ဆက်နေတဲ့ပြဿနာကိုလည်းဖြေရှင်းပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ iPad တွေအတွက်လည်း .?123 Key တွေရဲ့မူလနေရာကိုပြန်လည်ရွေ့ပြောင်းပေးထားတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ နောက်ထပ်ပြင်ဆင်ချက်တစ်ခုကတော့ တစ်ချို့ Video App တွေမှာ Subtitles ပေါ်မလာတဲ့ပြဿနာနဲ့ Bluetooth အသုံးပြုလို့မရတဲ့ ပြဿနာတစ်ချို့ကိုလည်းဖြေရှင်းပေးထားပါတယ်။
iOS 12.0.1 Update Log
iOS 12.0.1 ရဲ့ Update File Size ကတော့ 100MB ဝန်းကျင်ရှိပြီး iOS 12 Support ပြုလုပ်တဲ့ iDevices တိုင်းမှာ Update ပြုလုပ်လို့ရနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
iPhone XS ရဲ့ Charging ပွဿနာကိုဖွရှေငျးဖို့ iOS 12.0.1 ကို Update လုပျဖို့လိုမယျ
User အခြို့ရဲ့ Report ပွုလုပျမှုကွောငျ့ Apple ဟာ iOS 12 Stable Version ကို Update ထပျလုပျပေးခဲ့ရပါတယျ။ iPhone XS မှာဖွဈပျေါနတေဲ့ ပွဿနာတဈခုကွောငျ့အခု Update ကိုပေးလိုကျရခွငျးပဲဖွဈပါတယျ။
iPhone XS ကိုအားသှငျးကွိုးထိုးလိုကျတဲ့အခြိနျမှာ Display ပှငျ့လာပမေယျ့ Charging Process ကိုတော့လုပျဆောငျခွငျးမရှိတာကို User အတျောမြားမြားသတိထားမိလာကွတာကွောငျ့ Apple ကို Report လုပျပွီးမကွာခငျမှာ Bug Fix Update Version ဖွဈတဲ့ 12.0.1 ကို ထုတျပေးလိုကျတာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ iPhone XS အလုံးတိုငျးဖွဈတာတော့မဟုတျပါဘူး။
၎င်းငျး Update မှာ Charging ပွဿနာအပွငျ Wi-Fi ပွဿနာတဈခုဖွဈတဲ့ 5GHz Band နဲ့ကှနျယကျခြိတျဆကျရမယျ့နရောမှာ 2.4GHz Band နဲ့ပဲခြိတျဆကျနတေဲ့ပွဿနာကိုလညျးဖွရှေငျးပေးလိုကျတယျလို့ဆိုပါတယျ။ iPad တှအေတှကျလညျး .?123 Key တှရေဲ့မူလနရောကိုပွနျလညျရှပွေ့ောငျးပေးထားတယျလို့ သိရှိရပါတယျ။ နောကျထပျပွငျဆငျခကျြတဈခုကတော့ တဈခြို့ Video App တှမှော Subtitles ပျေါမလာတဲ့ပွဿနာနဲ့ Bluetooth အသုံးပွုလို့မရတဲ့ ပွဿနာတဈခြို့ကိုလညျးဖွရှေငျးပေးထားပါတယျ။
iOS 12.0.1 ရဲ့ Update File Size ကတော့ 100MB ဝနျးကငျြရှိပွီး iOS 12 Support ပွုလုပျတဲ့ iDevices တိုငျးမှာ Update ပွုလုပျလို့ရနပွေီဖွဈပါတယျ။
34 -5 47
18 Koln 34 -35 22
10 New Castle 38 -8 44
38 -10 44
1 Barcelona 37 69 90
2 Atletico Madrid 37 36 78
3 Real Madrid 37 50 75
4 Valencia 37 26 70
5 Villarreal 37760
6 Real Betis 37060
7 Sevilla 37 -10 55
8 Getafe 37 8 52
9 Eibar 37 -6 50
10 Real Sociedad 37 8 49
11 Girona 37 -10 48
12 Alavés 37 -9 47
13 Espanyol 37 -7 46
14 Celta Vigo 37 -3 46
15 Levante 37 -12 46
16 Bilbao 37 -7 43
17 Leganes 37 -18 40
18 Deportivo La Coruña 37 -37 29
19 Las Palmas 37 -49 22
20 Málaga 37 -36 20
အကောင်းဆုံး မြန်မာ့ရိုးရာလက်ဝှေ့သမား (၅) ဦး
အောင်လအန်ဆန် (Aung La N Sang) ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဟာ လီယမ်ဒရို အက်တီးစ် (Leandro Ataides) ဖြစ်လာပါပြီ
အောင်လအန်ဆန်ဟာ ဘာကြောင့် ပထမအချီမှာပဲ အနိုင်ရခဲ့တာလဲ
ကစားသမားဘဝတစ်လျှောက် ရှုံးပွဲမရှိဖူးတဲ့ သမိုင်းဝင်လက်ဝှေ့ကျော် (၆) ဦး